Flọ ọrụ ngwaahịa - China Ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị na-enye ha
Ngwa mkpuchi kristal rhinestone banding ifuru plastik siliki, na-adọkpụ plastik rhinestone tri ...
Mkpụrụ osisi bekee juputara nke ọma na MIYUKI delica beads 11/0 maka ịkpụzi ọla
N'ogbe k9 teardrop rhinestones kristal kristal, mma niile iche iche nke ebe azụ iko fancy ...
Bohemian ejiji ụdị bead ejiri mee Mens ọla mgbaaka ọla, akwa ọla mma mmachi mgbaaka
China kristal beads beads in bulk, akwa rondelle iko kristal kristal maka ịchọ mma
Factorylọ ọrụ ụlọ ọrụ Jingcan na-adọkpụ okwute, na-adọkpụ na rhinestones kristal
JCCrystal ika nwere ahia di iche-iche, tinyere okwute azu di egwu, okpo azu adighi, okwute ipu, mc chatons, okwute ichoro na okpu Ọ na-eji ezigbo iko uhere dị mma na ihe igwe CNC na-egweri egwu na usoro ịme oghere oghere iji hụ na ike okwute na ọdịdị dị mma.
Bey Miyuki Delica Kpụrụkpụrụ Ọdụ bụ nke edobere cylinder klọọkụ nke na-abịa nha anọ na ọtụtụ agba na imecha. Kpụrụkpụrụ osisi Delica nwere paịlị ma ọ bụ ọdịdị cylinder, na ewepụghị ọnụ nwere nnukwu oghere na nha ha. A na-ejikarị ha eme ihe ndị a na-eji ekwe ekwe rụọ ọrụ na kwa nke ọma.
Ngwa mkpuchi kristal rhinestone banding ifuru plastic dobe, ịkwanye plastik rhinestone trimming
Ngwakọta Rhinestone, Rhinestone Chain na trimming, karịa ụdị 80 dị iche iche, Na-anabata ụcha ndị ahịa, Akwa Ekike / Garment / Akpụkpọ ụkwụ / akpa / arịa / ọla / ọla. Ngwakọta rọba Rhinestone dịka ọnụ ọgụgụ nke ahịrị, enwere otu usoro ahịrị na ọtụtụ usoro ahịrị.
Mbupu free pel 6mm 6mm 8mm gburugburu iko pel beads olu na -e imomi i pearomi pearl ọla
2mm ekebeghi olu nke gemstone bu ihe eji eme ya
Na-achọ kpụrụkpụrụ osisi gemstone kachasị mma, na chaplet mara mma kachasị mma. JC Crystal dị mpako iweta chaplet nkịtị nke eke ahụ, nke a na-ere n'ahịa asọmpi kachasị mma. Anyị na-ebu ụdị dị iche iche kachasị mma na ịntanetị, gụnyere amethyst nkume, lapis lazuli, turquoise na-acha anụnụ anụnụ, nkume nke alaeze, amber resin, agate, ndị a niile dị ịtụnanya ma sie ike site na mineral kachasị mma n'okpuru anyanwụ. Odikwa n'ọtụtụ na nha.
Ọtụtụ n’ime anyị na-eyi ọla mma n’ihi na, ọfụma, anyị na-enwe mmasị n’otú ọ dị. Ikike ịchọ mma nwere ike ịbụ ụzọ iji gosipụta onwe gị, imecha akwa, yana ikwu okwu. Jewelry aburula ihe dị mkpa na ndụ ụmụ nwanyị ma nwee ọpụrụiche na ndụ ya. Ọla dịkwa ike na-emetụta ndụ ụmụ nwanyị n'onwe ha na ọrụ aka.
Ihe eji enyere gi aka bu ihe eji eme ya nma, nke eji eji uwe, mgbede, akpụkpọ ụkwụ, okpu, akpa aka, akwa, akwa, akwa, wdg. Bicone beads, beads beads, beads Tower, beads beads, beads beads, wdg.
N'ogbe ahia di nma, miyuki nkpuru kwo ahija nke puru iche maka ihe eji achọ mma
Ngwongwo ọla di nma na nke di onu ala, dika otutu ihe eji eme otutu iko mara mma, okwute ndi ozo, a na-eji akwa ola edo mee ihe maka ọla edo, ọla aka, olu. Customersbụ ndị ahịa na-ewu ewu. N'ime ndị ahịa anyị, akụrụngwa ejiri akwa bekee bụ nke kachasị mma erere. N'ihi na anyị nwere afọ asaa nke ahụmịhe na afọ 12 nke mbubata na mbupụ ahụmịhe nke bekee iko, anyị bụ ọkachamara.
Mgbaaka mara mma dị larịị azụ kristal na-abụghị ihe ndozi ntu ntu nka
Rhinestones Austrian na Czech hothotfix, abụọ ndị a bụ ezigbo mma, enweghị atụ na nchapụta, ịdị mma na ihe ndị ọzọ. Qualitydị ahụ nwere ike ịbịaru ogo pasent 100%, mana ọnụahịa ahụ dị elu, dabara adaba maka nche, eriri, akpa, wdg na ngwaahịa ndị ọzọ dị elu nke chọrọ rhinestone dị ala. maka rhinestones ụlọ, o siri ike inweta otu ụdị, mana ọ dịkwa oke mma, dabara adaba maka akwa, akwa, ihe ndị ọzọ. Nke ka mkpa, ọnụego ya na-arụ ọrụ kacha elu.